Translator Newsletter: Fianarana asa ao amin’ny Firenena Mikambana, Fahaizana fiteny roa sy fahalalana ara-tsosialy ary tantara hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2019 1:23 GMT
Tongasoa eto amin'ity fizarana taratasim-baovao ity indray! Androany isika dia hiresaka momba ny…
Fianarana asa ao amin'ny Firenena Mikambana
Nanonofy ho mpandika teny any amin'ny Firenena Mikambana ve ?! Fantatro fa maniry izany aho. Ary araraoty ary izany! Ny Departemantan'ny Firenena Mikambana momba ny Fitantanana ny Fihaonambe sy ny Fivoriana Iraisam-pirenena (DGACM) dia manolotra fianarana asa miisa 13, anisan'izany ny fandikan-teny amin'ny teny Sinoa, frantsay, rosianina, espaniola ary anglisy, ary koa fitateram-baovao, famoahana, sy fitantanana fahalalana. Jereo ato ny lisitra rehetra ary mariho fa amin'ny 30 martsa 2016 ny fe-potoana farany!
Fahaizana fiteny roa sy fahalalana ara-tsosialy
Samy efa nandre momba ireo tombontsoa tsy tambo isaina amin'ny fahafantarana fiteny mihoatra ny iray isika – ary amin'izao fotoana izao dia betsaka ny nampiana tamin'ny lisitra! Araka ity lahatsoratra ity ao amin'ny The New York Times,
“Mampiseho ankehitriny ny fikarohana vaovao roa fa tsy manatsara ihany ny fahaiza-manaon'ny ankizy ny fahaizana fiteny maro fa koa manatsara ny fahafahany ara-tsosialy.”
Na dia miseho amin'ny fiteny hafa fotsiny aza kanefa tsy afaka miteny na mahatakatra izany, dia efa fandraisana anjara hahazoan'ny ankizy mifandray tsara kokoa. Vakio ary ampahafantaro anay izay eritreritrareo!
Toro-hevitra ho an'ireo mpandika teny mahaleotena
Pikantsary nalaina tao amin'ny atasavvynewcomer.org
Amin'ny maha-mpandika teny mahaleotena miasa ho an'ny sampan-draharahan'ny fandikan-teny, mpitantana tetikasa ny ankamaroan'ny sasany amin'ireo olona ifandraisantsika. Nametraka ity lisitra toro-hevitra ity ho an'ireo mpandika teny mahaleotena vaovao, mivantana avy amin'ireo mpitantana tetikasa ny olona mahafinaritra ao amin'ny The Savvy Newcomer mba hanampy antsika hitantana ny firohotry ny asa, sy hanangana fifandraisana tsara, ary betsaka kokoa.
Famelomana ny fiteny indizeny ao Meksika
Pikantsary nalaina tao amin'ny Vimeo
Tetikasa vaovao mikasa hitahiry ireo tenin-janatany manerana an'i Meksika ny tetikasa vaovao iray antsoina hoe “tenin-drazana 68, fo 68” ary nanoratra lahatsoratra mahafinaritra momba izany ato izahay ato amin'ny Rising Voices! Amin'ny maha-mpandika teny sy mpankafy fiteny, tena nahaliana ahy ny teny nindramina eto ambany:
“Maneho fomba fijery miavaka eo amin'ny fiainana sy manerana izao tontolo izao ny fiteny indizeny. Ny fanjavonan'izy ireo dia midika ho fahaverezan'ny fomba fijery tsimanampaharoa iray manerana izao tontolo izao sy ny fanjavonan'ny vondrom-piarahamonina tsirairay, ampahany manan-danja amin'ny maha-olombelona.”
Sary sy soratry ny herinandro
Tsy mino aho fa ampy ny mpandika teny ho an'ny sary sy soratra ka mahatonga ahy hihevitra ny “Sary sy soratry ny herinandro” ho zavatra mampalahelo indraindray, saingy nahita iray mahafinaritra aho ka dia tsy tanako fa zaraiko:
Toy ny mahazatra, misaotra anareo rehetra noho ny asa mafy ataonareo sy ny fanoloran-tenanareo ho an'ny GV! Raha manana fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra ianao, dia aza misalasala mandefa mailaka ao amin'ny marianna@globalvoices.org.